के तपाईंले मायर्स-ब्रिग लिनुभयो? ENTP? | Martech Zone
हामी सबै बाल्टिनमा फ्याँक्न घृणा गर्दछौं, तर मयर-ब्रिग्समा कसैसँग एक ठूलो कुराकानीमा डुबेको छु। पछिल्लो दशकमा नतिजा कहिल्यै फरक भएन, म ईएनटीपी हुँ। यहाँ छ अंश:
ENTPs समस्याहरूको सामना गर्न कल्पनाशक्ति र नवीनता प्रयोग गर्ने तिनीहरूको क्षमताको मोल गर्दछ। उनीहरूको समस्याबाट मुक्त हुनको लागि उनीहरूको सहजतामा भरोसा गर्दै तिनीहरू प्राय: कुनै पनि परिस्थितिको लागि पर्याप्त तयारी गर्न बेवास्ता गर्छन्। यो विशेषता, एक प्रोजेक्ट पूरा गर्न आवश्यक समयलाई कम आविष्कार गर्ने प्रवृत्तिसँग मिलेर, ENTP अधिक-विस्तारित हुन सक्छ, र अपेक्षित समय सीमा भन्दा बाहिर बारम्बार काम गर्दछ। यस अवस्थालाई जटिल बनाउने नयाँ समाधानहरूको साथ प्रयोग गर्न उनीहरूको सम्भावना हो। यसले उनीहरूलाई अर्को चुनौतीमा जान उत्सुक बनाउँदछ जब चीजहरू बोरिंग हुन्छन्। ENTPs तनावग्रस्त हुन्छन् जब उनीहरूको अस्थायी क्षमताहरू अप्रभावी हुन्छन् र तिनीहरू असफल हुने परिस्थितिबाट टाढा बस्छन्।
यदि तनाव जारी रह्यो भने, ईएनटीपीहरू विचलित हुन्छन् र उनीहरूको "गर्न सक्छन्" मनोवृत्ति खतरामा पर्दछ। अक्षमता, अयोग्यता, र अपर्याप्तताको भावना लिन्छ। तिनीहरू त्यस्तो अवस्थाबाट भाग्नुपर्दछ जुन चिन्तासँग सम्बन्धित छ ईएनटीपीको लागि अन्य व्यक्तित्व प्रकारको भन्दा बढी प्रख्यात छ। तिनीहरूसँग यो काम पूरा गर्न के हुन्छ भन्नेमा शंका छ, तिनीहरू आफ्नो डरलाई हटाउन सक्ने परिस्थितिहरूमा विस्थापन गर्दछन्। आतंक, डर, र चिन्ता तब तिनीहरूको रचनात्मकता को अभिव्यक्ति रोक्नुहोस्। बचावत्मक फोबिक प्रतिक्रियाहरूको कारणले अन्य क्षेत्रहरूमा ईन्टीपी उपलब्धिलाई बाधा पुर्‍याउँछ र उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलतालाई रोक्दछ।
यो अचम्मको (र निराशाजनक) हो कि यो परिभाषा मसँग कति यथार्थ छ। यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व हेर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ धेरै छन् स्रोत अनलाइन। मायर्स ब्रिग्सले तपाईंलाई अन्य कर्मचारी र ग्राहकहरूसँगको तपाईंको सम्बन्धमा सहयोग गर्न सक्दछ, साथ साथै तपाईंलाई सफल हुनको लागि ध्यान दिन आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छ।
टैग: कल्ट्सgrexitजिम इरसेमोबाइल बृद्धिWindowsविन्डोज फोन
अवसर पहिचान गर्दै
मई 5, 2008 मा 9: 22 एएम
म ENTJ हुँ। म पूर्ण रूपमा सहमत छु - यी परिणामहरू क्रूर ईमान्दार छन्।
मई 5, 2008 मा 12: 29 PM
डग, तपाईं पनि एक वृषभ हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं एक स्थिर, कंजर्भेटिभ, घर-मायालु व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सधैं वफादार साथी वा पार्टनर बनाउँदछ। मैले तपाईंलाई सूर्यास्तमा समुद्री किनारमा लामो हिड्सहरू जस्तै सुनिरहेको छु।
व्यक्तिले व्यक्तित्व परीक्षणको अंशहरूसँग पहिचान गर्छन् जुन तिनीहरू स्वीकार गर्न सहमत हुन सक्छन्। माईर्स-ब्रिग्स साइटमा पनि उनीहरू उल्लेख गर्छन् कि परिणामहरू १ 15--47% अमान्य छन्। म यी परीक्षाहरूको बारेमा धेरै स ske्कल्पित छु। मैले जानाजानी यी परीक्षाहरूलाई गलत तरिकाले लिएको छु, र अझै पनि सह-कामदारहरू / रोजगारदाताहरूले महसुस गर्दछन् कि परिणामहरूले मेरो व्यक्तित्वको सही प्रतिनिधित्व गर्दछ, (र तिनीहरूमा कार्य गर्ने प्रयास गरेको।)
अनलाइन माईर्स-ब्रिग्स परिक्षणमा सबै प्रश्नहरूको जवाफ "हो", र हेर्नुहोस् यदि तपाईं अझै पनि परिणामहरूसँग पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। (अक्षरहरू र प्रतिक्रियाहरू उपेक्षा गर्नुहोस् जुन तपाईं जहिले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ।)
मई 5, 2008 मा 1: 22 PM
म एक मेष हुँ ... जिद्दी सम्झना ?!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 17::2008० अपराह्न
श्री डग्लास, म तपाईंलाई चुनौती दिन्छु कि एक उचित, नैतिक वातावरणमा माईर्स ब्रिगहरू लिने बारे विचार गर्न। http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html
तपाई देख्नुहुन्छ, जब यो उचित तरिकाले प्रशासित हुन्छ, तपाईले सबै प्राथमिकताहरूको अर्थ के हो भन्ने खोजको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दछ, तपाईको जन्मजात प्राथमिकता के हो। यो अनैतिक छ, किनकि माईर्स ब्रिग्सको उद्देश्य हो, आकलन लिनुहोस् र त्यसपछि तपाईंको रिपोर्ट गरिएको प्रकारले परिभाषित गर्नुहोस्। जब नैतिक रूपमा गरिन्छ, तपाईं छनौट (स्व-चयन) गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईं रिपोर्ट गरिएको प्रकारसँग तुलना गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईं आफ्नो बेस्ट फिट प्रकार निर्धारण गर्न दुई मूल्यांकन गर्नुहुन्छ। त्यसोभए ... र त्यसपछि मात्र, माईर्स ब्रिगहरू पूर्ण रूपमा यसको 'पूर्ण सम्भावना' प्रयोग गर्न थाल्छ: मानिसहरूलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईंलाई मद्दतको लागि तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। चेक आउट गर्नुहोस् http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html नैतिक तरिकाको एक अनलाइन संस्करण मायर ब्रिग्स प्रकार सूचक मार्फत आफूलाई पत्ता लगाउन। यो पर्याप्त पुरस्कृत हुन्छ, जब यो सही तरिकाले प्रशासित हुन्छ। पूर्णता को यात्रा को चीयर्स ...
मई 6, 2008 मा 3: 39 PM
हे, विडंबना, म पनि एक ENTP हुँ (सीमा रेखा INTP)। र ती विवरणहरू स्पट हुन्, कम्तिमा मेरो लागि।
मई 11, 2008 मा 5: 05 PM
म यहाँ ESTJ हुँ!
मई 11, 2008 मा 8: 18 PM
म INFP हुँ।
जे भए पनि म प्राय जसो यी परीक्षणहरू लिन्छु (वा यीमध्ये कुन परीक्षण म गर्छु) यो सधैं उस्तै हुन्छ। त्यसैले म अनुमान गर्छु कि म यसको साथ अडिएको छु (र यो पनि मिल्दछ ...)
र म एक मेष हुँ
अगस्ट 23, 2008 मा 2: 33 AM
त्यो अद्भुत छ। म पनि एक ENTP + मेष हुँ। मैले दुबैका लागि परिभाषाहरू समानताहरू पाए र मेरो लागि सही छन्
डिसेम्बर १, २०१ 28 2012:२:2 अपराह्न
म ENTP महिला, लन्डनमा मार्केटिंग र सिर्जनशीलता मा स्नातकोत्तर सुरू गर्न जाँदैछु। मँ काम बजार को सम्बन्ध मा आफूलाई स्थिति अझै पनी छ। मेरो श्री सल्लाहका लागि तपाईको दिमागको कुनै शीर्ष शीर्ष सल्लाहकार हुनुहुन्छ? 🙂
@ अय्यास्मीनबेनिस: लगभग दशक अगाडि डिस्कस मैले ब्लग गर्न थालें र यसले मेरो जीवन परिवर्तन गर्‍यो। अब ब्लग मेरो आफ्नै एजेन्सीको केन्द्रबिन्दु हो (DK New Media)। यो सबै मेरो अन्वेषण र सबैको साथ अनलाइन साझेदारी साझा गरेर सुरु भयो ... मैले बिस्तारै अधिकार र सम्मानित स्थानमा अधिकार र नाम बनाएँ। म सँधै सकारात्मक हुन र मेरो व्यक्तित्व पनि साझेदारी गर्ने प्रयास गर्दछु (यद्यपि म परमेश्वर र राजनीतिमा बसेको छु) :)। मलाई लाग्छ तपाईको आफ्नै ब्ल्ग सुरू गर्नु वा तपाईको रुचिमा एक योगदानकर्ता लेखक बन्नको लागि भन्नु राम्रो तरीका हो।
यो आश्चर्यजनक अनौठो छ! मैले भर्खर days दिन पहिले ब्लग सिर्जना गर्ने निर्णय गरें! यसको माध्यमबाट, म कला, व्यवसाय र दैनिक जीवनमा सृजनात्मकताको पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्नेछु। मलाई तपाईंको दृष्टिकोण राम्रो लाग्दछ एक पटक तयार भएपछि! तपाइँको शीघ्र प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद!
डिसेम्बर १, २०१ 30 2012:२:9 अपराह्न